Chaminuka : Sekuru's Stories Chaminuka : Sekuru's Stories
Muridzi ndiTute Chigamba
Ndakarota hope yemunhu akanga akareba chaizvo. Asi ndingaite sei? Ndobva ndaita rumbo rwakada kufanana neTinovatenda, runonzi Chaminuka. Nokuti ndiye munhu wandikaona kuhope, akandiudza zvaakandiudza. Akati, “Muchatonga, muchafarisa, muchakanganwa, muchatambudzika.” Zvikanzi, “Ndozvinhu zvandiri kukusiyira izvozvizvi. Uchazviona.” Saka iye zvino izvi, zvinhu zvacho tiri kuzviona. Ehe, kufarisa takafarisa, hatina kuzoziva kuti tinozvitanga takadii, kana tava kufara?
Ehe, takazoudzwawo futi naVaMutumwa, zvikanzi, “Makafarisa. Hamuna kukwanisa kuziva kuti chamunotanga chii? Pakupemberera, mava kupemberera. Zvino hamuna kuziva kuti chamunotanga chii? Paitangwa tsiru dema remombe, chichiri chidikidiki, ndochaitanga kupiwa kunaAmbuya Nehanda. Vanhu vaozodii? Vozouraya dzimwe mombe dzese idzi, asi rekutanga itsiru dema iroro, ndoraifanira kudii? Kuturirwa kunaAmbuya Nehanda. Ambuya Nehanda voziva kuti vazukuru vavo vese vakadii? Vadzoka. Mapfupa ayaya akadii? Akadzoka. Vakapedza hondo yavo. Saka ivo vakuru manje vemuno vakanzi ndimi madzibaba, hamuna kuitira izvozvo. Maifanira kunge ndimi makaita izvozvo. President haafanire kuita izvozvo nokuti mwana, waakanga ari kuhondo. Ndiye akatungamirira vana ava. Saka haazvitende ega, asi kutoti imimi vabereki makasara muno ndimi munotenda President iyeyu.”
Kana kutanga pakupemberera Independence zvainzi, “Ndimi munodii? Motanga kuita izvozvo.” Saka havana – hapana akazviita. Zvikanzi, “Ah, uchisiya zvakadaro, tava kuzvisiyira kuvadzimu.” Ndozvakaita kuti ndizowana rumbo, Chaminuka. Saka irumbo runokosha.